Zibakhalele beyokokotela eMnyangweni wezaseKhaya - Ilanga News
Home Izindaba Zibakhalele beyokokotela eMnyangweni wezaseKhaya
Zibakhalele beyokokotela eMnyangweni wezaseKhaya
AboMnyango wezaseKhaya bathi amaphepha abafike nawo abesolisa
BASHAQWE ngamaphoyisa abesifazane abebeyozama uku-shaya izitifiketi zezingane ezingamaweli ngamaphepha omkokotelo emngangweni
BALAHLWE ngelakubo abesifazane abathathu ba-seMlazi aba-shaqwe ngama-phoyisa izolo ngoLwesitha-thu emahhovisi oMnyango wezaseKhaya, eMngeni bezama ukusebenzisa amaphepha awumkokotelo ukuze bashayele izingane ezingamawele zowesifa-zane waseSwazini izitifiketi zokuzalwa.
ILANGA lithole ngomphathi wala mahhovisi, uMnu Mbongeni Magagula – okunguyena okwazile ukubona ukuthi kukhona okusha-ya amanzi ngamaphepha abephe-thwe ngabasolwa – ukuthi phaka-thi kwalaba besifazane bekukhona nonina wezingane.
Utshe-le leli phepha-ndaba ukuthi abasolwa bebephethe ama-phepha obekucaca ukuthi bawathengile.
Uveze ukuthi kulaba besifazane bekukhona unina wezingane wa-seSwazini, owesifazane okhubazekile, okunguyena abebeqamba amanga bethi ungunina wezinga-ne – kanti ukhokhelwe ukuba aqa-mbe amanga – nongqondongqondo wabo bonke lobu bugebengu.
“Kufike abesifazane abathathu bephethe incwadi yasemtholampilo waseMbumbulu, eqinisekisa ukuthi lezi zingane zizalwe khona kodwa ibiwumgunyathi. Into ebabambisele wukuthi le ncwadi abebeyiphethe ibingasho ukuthi izi-ngane ezizobhaliselwa izitifiketi ngezabuphi ubulili, okuyinto engakaze yenzeke.
“Bebeqhuba lo wesifazane okhuba-zekile, bethi akaboni kahle emehlweni futhi akakwazi nokukhuluma, bethi nguyena unina wezi-ngane. Sibe sesibabizela eceleni, saqala sabaphosa imibuzo.
“Lo obekuthiwa ngunina wezi-ngane, uqale wazenza umuntu ongakwazi ukukhuluma nongaboni kahle emehlweni. Kuthe uma simkhombisa ukuthi kasidlali sizombopha ngempela, laqala la-phuma izwi wabe esekhuluma iqi-niso ethi izingane akuzona ezakhe, uceliwe ukuba azishayele izitifiketi.
“Ube esekhomba unina wezi-ngane naye obekhona. Basitshele ukuthi incwadi yasemtholampilo bayithenge ngo-R1 000 khona eMbumbulu,” kusho uMnu Maga-gula.
Uthi unina wezingane nazo uqo-bo ngabaseSwazini, bebekwenza lokhu ngoba befuna ukubhalisela imali yeqolo. Uveze nokuthi aba-solwa baveze ukuthi unina wezi-ngane ubesezame kaningi ukuzi-shayela izitifiketi kodwa engasiza-kali, wabe esebona ukuthi maka-thenge amaphepha.
Okhulumela amaphoyisa Kwa-Zulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele, uthe amaphoyisa abophe abesifazane abathathu ngamacala okukhwabanisa, kulindeleke ukuba bavele enkantolo khona maduze.
Previous articleIngene enkantolo ibakaza inhlalisuthi esolwa ngokubulala umkayo ngesihluku
Next articleUsengumfundisi obedonsa ngobunkabi